Wednesday October 23, 2019 - 19:33:36 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Dagaallo culus ayaa deegaanno kaabiga ku haya xuduud beenaadka ay wadaagaan Soomaaliya iyo Kenya ku dhaxmaray ciidamada Xarakada Al Shabaab iyo maleeshiyaad gacan saar laleh melleteriga Kenya.
Wararka ka imaanaya duleedka deegaanka Kulbiyoow ee Jubbada Hoose ayaa sheegaya in halkaas ay maanta siyaaba kala duwan uga dhaceen dagaallo xooggan oo saacado badan qaatay.
Maanta barqadii ayay maleeshiyaad daacad u ah ciidanka Kenya ee Kulbiyoow ku sugan waxay weerareen tuulo lagu magacaabo Jadeecaaley waxayna isku dayeen in ay boobaan dukaamo ganacsi iyo hanti kale oo ay leeyihiin dad shacab ah.
Markii ay maleeshiyaadku gudaha deegaanka galeen ayay weerar culus kala kulmeen ciidamo katirsan Al Shabaab oo ku sugnaan banaanka deegaanka, dadka deegaanka ayaa warbaahinta u sheegay in dagaal aad uculus uu gudaha deegaanka ka dhacay.
Daqiiqado kadib maleeshiyaad gurmad ah oo deegaanka Kulbiyoow kasoo dhaqaaqay ayaa wadada loo galay arrinkaas oo dagaalka ka dhigay mid laba geesood ah.
Maanta gelinkii dambe ayay xoogaga Al Shabaab weerareen maleeshiyaad kale oo dhac ka geysanayay tuulo lagu magacaabo Goor oo iyana hoos tagta deegaanka Kulbiyoow.
Dagaal sedaxaad ayaa gabaldhicii maanta markale ka dhacay afaafka hore ee deegaanka Kulbiyoow waxaana la sheegay in wadada loo galay maleeshiyaad Meydad iyo dhaawacyo watay.
Dagaalladan ayaa imaanaya xilli saacadihii lasoo dhaafay ay roobab mahiigaan ah ka da'ayeen degmada Badheedhe iyo deegaannada hoos yimaad, maleeshiyaadka maamulka 'Jubbaland' ee ciidamada gummeysiga Kenya kula sugan Kulbiyoow ayaa caada ka dhigtay in ay dhac iyo goob ugeystaan hantida shacabka.